Soomaali | Kongressen 2011
Shirweynaha dalladda ee tiyaatarada ee 2011
Ha hawlgal qaabka mustaqbalka dalladda tiyaatarradu uu yeelan doono!
Xubnaha dallada tiyaatarrada, ururrada yaryar iyo kuwa waaweyn ayaa ka hawlgelaya qaabka horumarinta shaqada dallada tiyaatarradu uu hore ugu marayo – Afartii sannaddoodba mar bay ku kulmaan wakiillada iyo ka qeybgalayaashu shirweyne. Waxaa Stockholm ka dhacaya laga bilaabo 20 – 22 maajo 2011 shirweynihii dalladda tiyaatarrada.
Jidka loo marayo shirweynaha
Arrimaha hadda taagan waxaa isla soo diyaariyay ururrada iyo xubnaha ka jira dhammaan wadanka hareerihiisa. Sanadkii 2009 waxaa la qabanqaabiyay dhowr ”Gole tashi oo mustaqbal” oo lagu qabtay gobollo iyo degmooyin kala duwan, halkaasi oo arrimaha mustaqbalka dallada tiyaatarrada lagaga wada hadlay. Sanadkan 2010 ayaa ”isku soo ururrin hindise”, wax lagu tilmaamay, ay xubnaha iyo ururradu kaga soo wada shaqeeyeen, kagana soo wada gaareen natiijooyin ay ku mideysan yihiin. Shaqadaas lagu mideysan yahay ayaa saldhig u ah soo jeedinta ay dalladda tiyaarrada gudigooda heer qaran ay soo bandhigi doonaan – soo jeedin ahaan. Ilaa iyo 19 janaayo, waxaad haysataan adiga iyo ururkaagu fursad aad hirweynaha ku soo hordhigi kartaan soo jeedintiinna, mashruuc ahaan.
Weydii , dhiibo ra’yi, kana dood
Weli waad weydiin kartaa, fikradda iyo ra’yiganna waad ku soo bandhigi kartaa golaha doodda ee bogga internetka www.riksteatern.se/kongress waxaad kale oo ka akhrisan kartaa soo jeedinnaha ilaa hadda la soo bandhigay, ka akhriso faahfaahin dheeraad ah, kuna qor mashruucyo. Ka dhiibo fikraddo doodda socota hadda ilaa laga gaarayo shirweynaha maajo 2011! Halkan waxaa kale oo aad ka helaysaa dhammaan macluumadka ku saabsan shirweynaha iyo wixii warbixin ah ee ku saabsan hawlaha shirka.
Macluumaadka dalladda tiyaatarrada
Dalladda tiyaatarrada waa urur madax bannaan. Shirweynuhu waa xubinta go’aaminta ee dalladda tiyaatarrada ugu sareysa. Shirweynaha waxaa la qabanayaa afartii sannaba hal mar. Halkaas oo ay isugu yimaaddaan wakiillada iyo goobjoogayaasha ka socda ururrada dalladda tiyaatarrada, ururrada waaweyn iyo tiyaatarrada gobollada ee xubnaha ka ah. Shirweynuhu wuxuu go’aamiyaa waxyaabo ay ka mid yihiin jahaynta hawlaha waxqabad ee dallada tiyaatarrada, waxaana lagu doortaa gudiga maamulka. Soo jeedinta la doonayo in laga gaaro go’aan, waxaa lagu soo ururriyaa hindise ay soo diyaariyeen guddiga dalladda tiyaatarradu iyo mashruucyo ay soo bandhiggeen ururrada iyo xubnuhu.